0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe emisasa yangu yevaeni munguva yakapfuura. 3 zvinhu zvaunogona kuita iye zvino kuti uvandudze blog yako Kuburitsa maitiro kuwedzera mikana yekubudirira Kuramba muhutano hwekubatana: Nhungamiro yevatanga 2. Crowdsourcing-Post
0.3 4. Syndizieren Sie Blog-Beiträge kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira
0.5 6. Blog-Kommentare
0.6 7. Forumbeitrag
1.1 Idee # 1 – Nyora uye utengese eBook
1.3 Idee Nr. 2: Kukurudzira michina yakabatana mumamiriro akasiyana-siyana
1.4 Idee Nr. 3: Shandisa basa bhodhi
Vamwe vanoda ku tanga blog uye kuita rumwe rutivi rupiro rupiro muIndaneti. Vamwe, kuti vasiye nzira dzese dzekutengesa kushanda, kana kuwedzera bhizinesi ravo paIndaneti, kana kusiya basa ravo 9-zu-5, nezvimwewo.
Ndakatora (uye ndakaona vamwe vakawanda vachiwana) zvimwe zvibereko zvakanaka kuburikidza neshinga iri. Ichi mapoka evanhu vari kutengesa Triberr kuti ini ichangobva kunetseka kuti ndive ndakapinza mune zvinyorwa zve1.000 munguva pfupi.
4. Syndizieren Sie Blog-Beiträge kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira
Iva nechokwadi chekuti zvitsva zvako zvitsva zvinodzokera kumashoko ako ekare kutora mumugwagwa. WHSR-Blog inobatanidzwa kune dzakawanda dzemasayiti anozivikanwa anosanganisira Soziale Medien Nhasi uye Bhizinesi 2 Community.
Heino muenzaniso mukuru wir mumwe munhu akazviita zvakanaka.
Kutanga, Miller Miller anoenda mune imwe tsanangudzo, achipa maonero akasiyana-siyana anoenderana nechokutanga chekutanga uye achiita kuti vaverengi vazive nezvake uye kufanirwa kwake kune musoro. Nokugovana zvaanoziva iye, anoratidza unyanzvi hwake pachedu yekutsvaga, achiwana ruzivo rwangu uye achinditora kuti ndidzidze zvakawanda pamusoro pake … zvakanyanya zvokuti ndakatarisa paMo Moz profile uye zvino.
Tsvaga Mazano Akakodzera Mu Nische Yako (Google Kutsvaga "Stichwort" + inurl: forum), zvinyorwa zvinobatsira zvinyorwa / mhinduro, kukurudzira nzvimbo yako paine zvinyorwa zvisungo kana kurasa zvikwereti mumasangano ako, asi kana chete zvakakodzera.
Nharaunda yemagariro eGoogle + yakafanana zvakakosha semusangano – chinhu chinoita kuti kubudirire ndechokupa zvakawanda zvizhinji zvemashoko anokosha kuvanhu vemunharaunda mukutsinhana.
Munhu wose Anoda Werbegeschenke. Mushure mevose vasingadi kuwana chimwe chinhu nokuda kwekusununguka?
Bhizinesi rangu rebhizimisi paWeb Hosting Geheimnis enthüllt (WHSR) iri kukurudzira kushandira mazano. Pane kungopinda mukati meGoogle SERP yakawanda, ndakawana zviri nani kutarisa Webdesigner vanogona kunge vachishandisa mazano angu ekugamuchira. Kuti ndigare pachigaro nevateereri ivavo, ndakagadzira mitoro yekusununguka.
avo zvisikwa zvemasikirwo ehurukuro? Ja – Werbegeschenke inotarirwa kune vateereri vangu vakuru.
Mifananidzo yakasununguka zvirokwazvo yakagamuchira kunyanya kubva kune Blogosphäre, ichiunza vatenzi vatsva uye vateveri vevanhu. Kana iwe unofarira, izvi zviri zvishomanana zveblogi izvo zvichitaura maharabi.
Einnahmen gegen Twitter-Follower
Vazhinji mablogiki vanoshamisika kuti mitemo yekuvimba nayo inouya pakusimudza mari yavo. Vakomana paGavhuna Hacker vakarangana mari pamwe neboka re Metriken uye hapana chakaswedera pedyo nevateveri ve Twitter.
Kukura vateveri vako veTra & der Verkehr
Oft twittern. Kuti uite kuti vateveri vako vadzoke uye vakanise pa tweet yako, iwe unofanira kutanga kuonekwa pa Twitter. Kuti ndiite izvi ndinoshandisa purogiramu inonzi yainzi Dzoserai Alte Post uye kupedza 20 – 25 maminitsi zuva rimwe nerimwe paComm.it kuti tibatane nevateveri vangu ve Twitter.
Nzira yekuwana Nische inobatsira sei, uye
Izvozvo zvakati, yeuka mupfungwa kuti pane nzira dzakawandisa dzokuita mari paIndaneti. Kana iwe ukatarisa kuchinyorwa cha Ashley Faulkes, chaakafukidza zvinopfuura 100 Online-Geschäftsideen; iwe uchaona kuti bloggen ingori chikamu cheiyo mufananidzo mukuru. Mibvunzo yekuzvibvunza iwe, sekufunga kwaAshley, ndeiyi:
Idee # 1 – Nyora uye utengese eBook
Kutengesa ebook ibhuku rekugadzira Monetarisierung maitiro.
Nyanzvi dzakawanda dzakatanga kuzviitira zita ne ebook. Überweisung Sethi, muvambi wir Ini Ndichakudzidzisa Iwe Kuti Uve Wakapfuma uye mumwe wevanonyanya kuzivikanwa mubhizinesi rekuInternet, akatengeswa bhuku Rechen rokutanga nokuti $ 4,95.
Bhuku iyo eitungamirira kune ein Bestseller der New York Times uye 14 michina yakasiyana-siyana yepamuyamisi yakaita kuti ave munhu akapfuma kwazvo – zvose zvakakwana paIndaneti uye zvakanyanya kutengeswa kuburikidza.
Es ist ein Sarudzo. Izvi zvichabatsira kuronga pfungwa dzako sezvaunonyora.
Tumira kune imwe maona ebook e vorlage. Heano zvishoma kubva HubSpot.
Gadzira chivako (kureva. Canva) kana kubhadhara freiberuflicher kuti aite (ein selbstständiger Designer kostet ~ $ 26 / warte nguva dzose maererano neongororo yangu yekubhadhara)
Photoshop Yako Deckblatt 3D E-Book-Bild. Pat Flynn akaisa pamwe ein Video huru pamusoro pekuita izvi.
Idee Nr. 2: Kukurudzira michina yakabatana mumamiriro akasiyana-siyana
Apo funganyi achinyanya pa URL iyoyo neAID yako uye atenga chigadzirwa, iwe uchawana mari.
Iyi Mischonga Inogona Kugara Yakashanda Kwenguva Yakareba, Ichikupa Mari Yekutora Kwehupenyu Hwezvinyorwa Zvose.
4- Kukurudzira michina yakabatana mune imwe email emailrespondrespond
E-Mail chinhu chine simba kushambadzira chishandiso. Ndiyo imwe yemashoma mashoma ayo vanhu vanoongorora zuva nezuva uye vari vanoda kuendeswa kune.
Ein E-Mail-Autoresponder inofanirwa kutenderera kwemaimeri inotumirwa kuvanhu apo inyoresa kune yako E-Mail-Liste.
Zvose izvi zvinokubvumira kuti uise ein Autoresponder.
Kungofanana nekusimudzira michina yekubatana pabhogi yako, kukurudzira zvinhu izvi mu E-Mail Autoresponder zvinogona kuunza mari yekusarudzira iwe.
Iwe unogona kana kuvasimudzira zvakananga mumaemail kana kugadzira blog post tutorials uye kusimudzira izvo. So oder so, Scheibe Mukana Wekuti Mari Muhomwe.
Paunenge uchisimudzira chigadzirwa, Tarisa-Scheibe izvo zvavanogona kuwana uye kwete pachigadzirwa ichocho. Kana iwe wakawana mhinduro uchishandisa, ita shuwa kutsanangura izvo zvakadzama. Izvi zvichaita kutengeswa kwako.
Idee Nr. 3: Shandisa basa bhodhi
Mapurisa eJobho anofanana nevanotsvaka basa nevashandi. Vanogona kupa nguva yakazara Konzerte, nguva yenguva, kana basa rechibvumirano.
Semuyenzaniso, Problogger Jobbörse inobatanidza Blogger nemakambani anotarisa kuti akwanise munhu kuti aumbe zvigadziro kwavari.
Hongu iwe unogona kuita mararamiro kuburikidza nekubhugama. Vamwe Vema-Blogger Makuru Vanowana Pedo Kusvika Kumatanhatu Matanhatu Pamwedzi Nguva Dzose.
Nhamba yehupenyu hwehu Blog yakakosha. Asi Kutanga Kutora Mari, Bhulogi Yako Inodawo Kuva Nische Inobatsira Uye Kuwana Zvakakwana Zvinotarirwa Nemugwagwa.
Heino imwe yekupedzisira yeuchidzo ndisati ndapedza iyi Beitrag: Zvizhinji zvinobva chiito.